Okuningi Ernest Hemingway ukuthi ukugembula uhlobo kakhulu ukuzingela ozingela amalungelo. Lowo yazama ukubhekana nalo okungenani kanye, akasoze abe ngaphezu unesithakazelo kunoma yini enye. Umlando has izibonelo eziningi lokho. Cishe zonke eyishumi emlandweni wezwe lakithi futhi kwamanye amazwe emhlabeni waphawula izenzo zomunye lobugebengu, amaphekula noma Maniac.
Abantu eziyingozi kakhulu emhlabeni ahlelwe Guinness Book of Records. Kungakhathaliseki kubalulekile ukukhumbula mayelana Osama bin Laden noma Chikatilo? Amagama abo iyayithusa izingane Naughty, nakuba lezi izigebengu ukulimaza omunye umuntu can not. Nokho, uhlanga lwesintu akasoze usukhathele ukuthi yena ngokwakhe. Ingozi embi kunazo zonke kubantu besikhathi sakhe yilezo izigilamkhuba basagcwele, naphezu izizumbulu esiwabelwe ezimpilweni zabo.
Sethula uhlu lwethu 10 abantu abayingozi kakhulu emhlabeni.
Jikelele uJoshuwa Blahay
Namuhla uJoshuwa Blahay - eyaziwa mshumayeli inabalandeli abaningi, naphezu imibono kunalokho yasekuqaleni futhi ngendlela yokushumayela kwakhe. Nokho, ungenza okufanayo akazange ukudlala ngaso sonke isikhathi. Abaningi asebemnkantsh 'ubomvu ukukhumbula isikhathi ngaphambi 1996, lapho Blahay wema ngasemnyango ikhanda ababevukela, owalwa Lokuqala waseLiberia Yombango. Wayaziwa ngokuthi umuntu oyingozi kakhulu, isidlova esasibizwa futhi umashiqela, umkhulekeli kaNkulunkulu, uSathane. Lolu lwazi waqinisekiswa uJoshuwa yena, owathi ku interview eziningi kwaba uSathane wenza kuye ukwenza izinto ezimbi. Nokho, akazange aphenduke amacala abo.
Ngakho kungani Blahay wenza uhlu abantu eziyingozi kakhulu emhlabeni? Ngaphambi kokuthumela empini amasosha amasosha akhe, wayekwenza umhlatshelo. Futhi isisulu isiko njalo kwadingeka izingane ezincane. Ngokwe-jikelele kakhulu, isinxephezelo isisulu kuyoba kukhulu kune ezingaphansi kweminyaka engu-wegazi lakhe. Zonke elalise-amasosha ngesikhathi ukulwa - kuyinto izicathulo, kanye, yebo, izikhali. Ngaphambi impi, amasosha akhe wathatha utshwala nezidakamizwa, wabe esemdubula wonke umuntu nayo yonke into endleleni yayo. Amabutho General kokubhubhisa wonke umzana, ngakho namanje abazi inani eliqondile izisulu. Yakhe yebutho jikelele agcwaliswa izingane ngemva kokuba abazali babo esingu.
Lapho kuxoxwa naye Blahay batshelwa ukuthi ukubulala yakhe yokuqala, alibiza ngokuthi umhlatshelo uSathane, elivezwa kweminyaka eyi-11. Waba umbulali wakhe omkhulu futhi wayeya siqhubeke umhlatshelo abantu njalo ngenyanga, kuze kube yilapho esekwazi engu-25 ubudala.
Ngokubulala ngesihluku nobushiqela kwaphela ngo-1996, njengoba nempi yayisiphelile.
Ukuze isihloko "indoda yingozi kakhulu emhlabeni emlandweni" ongancintisana omunye zobugebengu, ogama lenkaba - Ukraine. By the way, emazweni amaningi it is ngamanye amagama aziwayo. Lo muntu ubefunwa amane uthi zomhlaba, elithize abengumsunguli isakhamuzi Ukraine, eRussia, Hungary, Israyeli.
US kanye European abomthetho ngazwi linye ngokuthi umholi Mogilevich we mafia Russian. Lo muntu ubizwa genius eHayidese, okuyinto wakwazi ukuholela inethiwekhi omkhulu lobugebengu. Amalungu ayo asebenza cishe kuwo wonke amazwe athuthukile. The main imithombo imali Mogilevich - kungcono ngomzimba, izingalo kanye izidakamizwa, ukuphanga, ebugebengwini bokukhomba.
Ngo-2008, namanje Kuboshwe Russian umthetho enforcers, kodwa ngokushesha wakhululwa ku recognizance Ningamuki. Likuphi Don Smart njengoba isidlaliso sakhe eMelika ayaziwa, kodwa ukuze uthole ulwazi ezoholela bamba wakhe futhi eboshwa, FBI inikeza $ ayizinkulungwane 100.
Le ndoda yingozi kakhulu emhlabeni futhi kakhulu wafuna e-Italy - a mafia Sicilia Matteo Messina Denaro, eyaziwa ngokuthi Diabolik.
"Godfather" we Sicilia Mafia Denaro kwaqala ngo-2009, kodwa umsebenzi wakhe eHayidese waqala kudala kakhulu kunalokho. Waqala umbulali eqashiwe. Ngokusho kwamaphoyisa, abantu abangaphezu kuka-50 baye bafa ezandleni zakhe. Ukuthandwa lemimoya Diabolik wathola emva ukubulawa imbangi yakhe futhi intombazane yakhe ekhulelwe.
Okuningi ku 2002 Denaro ugwetshwe udilikajele, kodwa wazama naye engekho. Naphezu kwazo zonke imisebenzi okuphenya okuyinto Kwakuseshwa izikhathi eziningana ngamaphoyisa enombono ubambe gangster esiyingozi kakhulu kulelo khulu leminyaka lama-21, luhlala utalagu.
Isihloko esithi "indoda yingozi kakhulu emhlabeni emlandweni wezwe" Ungathola futhi ugandets Dzhozef Koni, nongumholi we "SeNkosi Resistance Army." iqembu Military adalwe Kony, buphikisana njalo noHulumeni wanoma Uganda.
amalungu LRA bakholelwa ukuthi umholi wabo okwaziyo ukukhuluma neNkosi. Nokho, lokhu akubavimbeli amahhashi ukufundisa abalandeli babo njengoba umbulali ngesihluku. Igama elithi "wabafundisa" isetshenziswa lapha hhayi ithuba, ngoba iqembu main siqukethe izingane. Kuyoze kube phakade khona-ke intshontshiwe izingane angaba yizinkulungwane 30. Ukuvula le ngane umbulali, umholi weqembu akudingeki isikhathi esiningi. Isisulu babehlala ekamu amasonto ambalwa, lapho amenable ukucindezelwa kakhulu ngokomqondo. Ngemva kwalokho, wanikwa isibhamu baphoqwe ukuthi babulale emikhaya yabo. Okungukuthi, ngokuvumelana uConnie, uwubufakazi engcono yokholo lwabo.
Lawo maqembu kwabancane bayakwazi ukulwa ne amasosha kahulumeni ukuvikela emzaneni, esebenzisa amahhashi izinjongo zabo. Njengoba umvuzo bathola utshwala nezidakamizwa.
Umholi we qembu kanye nabo bonke abalandeli bakhe, kuhlanganise nezingane, ziyadingeka njengoba abantu eziyingozi kakhulu emhlabeni. ugunyaza ayizikhulu beboshwa wakhishwa emuva ngo-2005. Kodwa Kony usagcwele amathafa ...
Ngokusho uhulumeni wase-US, indoda yingozi kakhulu emhlabeni - kuyinto Heriberto Lazcano. Indoda iyinhloko isidakamizwa nombimbi ezinkulu "Los Zetas", amalungu awo asebenza eMexico. Ngaphezu nokusatshalaliswa kwezidakamizwa ngefomethi ngamazwe, Lazcano is uyabandakanyeka ukudayiswa kwezikhali nokushushumbiswa kwabantu.
Ngesisekelo "Los Zetas" kukhona amasosha zakuqala elite amabutho ezikhethekile we Mexican Army abambuka ke, izikhulu zikahulumeni kanye amaphoyisa, okuyinto wakwazi ukugwazela Lazcano futhi amasosha owayekade waba yisosha laseGuatemala. Minyaka yonke abantu abangaphezu kuka-100 Melika ezandleni Lezcano. Inhloso yalo yokugcina - ngomhlatjelo. Ukuze ubani ungakwazi ukubamba lobugebengu, kuqinisekisiwe umvuzo 5 izigidi zamaRandi. Ukuze uthole ukwaziswa on ukuphi wenkokhelo kuyoba $ 2 million.
Umlando ukwakheka Los Zetas
Iqembu "Los Zetas" yadalwa 90 sekwephuzile, ukuze kuqedwe kwamanye amalungu nombimbi izidakamizwa, okuyinto ligcwaliswe "igalofu". Kuyinto ngenxa ukwakheka yakhe yamuva isibe elikhulu kunawo wonke eMelika Ephakathi, uhlobo esinakho. Esinye salezo waqoqa lo msebenzi, kwaba Lazcano oneminyaka engu-17 ubudala. Kancane kancane, "Los Zetas" yandile amandla ayo: ngaphezu ekususeni engadingeki "Golf" umncintiswano, amalungu aso waqala ukuqoqa izikweletu, uphinde uqinisekise ukulethwa izidakamizwa kuleli zwe.
Ngo-2010, phakathi "igalofu" futhi "Los Zetas" waqala le mpi, imbangela owawungumnyaka kubulawe kungafanele indoda ethile izinduna yokugcina. Esikhathini ukungqubuzana ebhekene bangabantu abayingozi kabi wonke abaye ezibhuqiwe emadolobheni amaningi ezindaweni izithakazelo zabo. Labo abanayo isikhathi ukuze kuphunywe yempi, babemane ubhujiswe.
Le ndoda yingozi kakhulu, aba nethonya elikhulu elisukela Jamaica eCanada - iyona ubhongoza kulezi zigilamkhuba, "Shower Posse" Christopher Cox Dudus isidlaliso. Imithombo oyinhloko wemali amalungu aleli qembu lezigelekeqe - izikhali, izidakamizwa kanye nokushushumbiswa kwabantu.
Eminyakeni eyishumi edlule e Jamaica ayenamandla amakhulu kwezigcwelegcwele elincane bafuna imali kuzo zonke osomabhizinisi wezwe, kungakhathaliseki ukuthi izinga labo imali. Ngemva ukubukeka komuntu, kodwa kuya iqembu elikhulu "Shower Posse" isimo kuleli zwe ishintshile kakhulu. Zonke zezigebengu waqala ukulalela Cox ezaziyibulele obengumholi. Ngaphezu kwalokho, base ngokwenyama iqedwe zonke ngubani akwazi ukuziphindiselela Dudusa izisulu. Sikhuluma izihlobo, abafazi nezingane lababuleweyo. Ngakho, ukuze bafinyelele imigomo yabo Cox ubulele izinkulungwane zabantu.
"Abantu bayayithanda '
Kusukela ngo-2009, uhulumeni wase-US ubizelé ngokuphindaphindiwe ukuze ayiswe e ka Coke kusukela Jamaica e-United States. Wamangalelwa ngokuvukela izidakamizwa ngezinga elikhulu. Nokho, iziphathimandla Jamaican ezinekhono zenqaba ingcaca ukuqala lokuphindisela izeqamthetho lapho zenze.
Naphezu unya lwezikhulu nkosi izidakamizwa kanye nesimo sakhe (indoda yingozi kakhulu emhlabeni), izakhamuzi Jamaican waqala ukumvikela uma ngo-2010 namanje imvume eyakhishwa ukuba aboshwe. Izwe kwavela ihlukane US Special Forces ukuba bamba wakhe. Izakhamuzi zenhloko-dolobha esasikuyo manje nayo yayibiyelwe amaphoyisa futhi badedelwa kuze kube isikhathi lapho Cox ayikwazanga ngempumelelo ukuphuma edolobheni futhi fihla i isiqondiso engaziwa. Isibalo izisulu e le ngxabano ifinyelele amakhulu. Abanye abangu-500 balimala kabi. Ukuze uthole ukwaziswa ekutheni kuboshwe ngumholi we "Shower Posse", umehlokaboni ka $ 3 million.
Leli gama ibizwa ngokuthi umalugaju ngubani Usizakala wobulili bubuhle 1985. Le ndoda eziyingozi kakhulu e-Los Angeles Kushone owesifazane oyedwa ngonyaka, kanti kungaba abe isisulu njengoba intombazane eneminyaka engu-14 ubudala futhi nkosikazi eneminyaka engu-35 ubudala. wesandla killer sika usukela bha. Abantu abaningi slipper - emnyama zobuhle lula, okuyinto wadlwengula kuqala bese wabulala ngu One Shot enhliziyweni.
Ngemva ngokuhlasela umalugaju elilodwa zezisulu zakhe ephethwe ukuze bahlale bephila. Wakwazi ichaza Maniac. Lo muntu omnyama yokuphakama ulimu engu-30.
ukuzingela okusha izisulu waqala ngo-2007, futhi ngo-2010 amaphoyisa yamemezela ukuboshwa olunegazi killer. Wabekwa icala lokubulala abesifazane abayishumi nokubulala omunye ukubulala. Nokho, ngemva inqubo waphela, futhi umbulali Kuthiwa kwaba ejele, kwatholakala yomzimba yomunye wesifazane, isikhumba izinzipho lapho izinhlayiyana eziye zatholakala okuqondene slipper Abuhlungu. Justice futhi wenza iphutha ...
Naphezu kweqiniso lokuthi igama umalugaju ayikaziwa, lingelikaJehova esigabeni "Abantu eziyingozi kakhulu emhlabeni." Izithombe izigebengu ababengabizwa ngokuthi eyiqiniso, alikho.
Mexico - hhayi ezweni ephephile ukuhamba, ngoba abantu abaningi kuyingozi kakhulu emhlabeni abe nesiqeshana sokuhlala Mexican. Ngo Ciudad Juarez ephethe umuntu noma iqembu labantu abanjalo. kwaze kwaba yilapho sithola ukuthi amaphoyisa. Nokho, inani eliqondile izisulu futhi kubangela ubunzima ngoba amaphoyisa aqapha. Ngokusho idatha ethile, the maniac bathunjwa, wadlwengulwa wabulawa abesifazane e 2666. Ngokusho ngolwazi olungekho emthethweni, lesi sifo sabulala inani eliphindwe kabili kunalelo.
Amakhulu emizimbeni kuthiwa efile unyaka ngamunye ehlane, eduze lapho dolobha lisendaweni. Abaningi babo wafa kusukela ukulahlekelwa igazi, engenamusa noma ukuboshwa inhliziyo. Nokho, ubunjalo Amanxeba abangelwa kunikeza isizathu sokukholwa ukuthi babulawa ngumuntu oyedwa.
Njengoba umkhuba ubonisa, kuba imikhonyovu yobugebengu ukuletha izigilamkhuba kamuva wayebizwa ngokuthi "abantu eziyingozi kakhulu emhlabeni." Zibhaleni phansi isikhathi eside sihlanganisa inhloko omkhulu ubugebengu sigejana D-Inkampani - Davuda Ibragima. Ukuthi lo muntu elawula zonke izindawo yesenzo sobugebengu e-India, Pakistan kanye UAE. izithakazelo zakhe asidlulisela yonke imisebenzi kungenzeka lolu hlobo - kusukela zokubulawa nokushushumbiswa kwabantu zezidakamizwa yokuthengisa nokulawula zobufebe. Ibrahim sigejana has a uxhumano ngqo "Al-Qaeda ', kanye nebambisene nabo.
Ngokwe-FBI, Ibrahim amboze wendawo Pakistani bezobunhloli, nakuba uhulumeni wayeshesha ukubiza lolu lwazi aluhlaza cwe. Nokho, okufanayo kukhulunywa ngalo Osama bin Laden, ngubani njengoba indoda yingozi kakhulu esidlule ezaziwayo.
kanzima ngokwanele ukuze kushiwo ukuthi indawo yokuqala simo "abantu eziyingozi kakhulu emhlabeni" ngoba uthi isihloko inqwaba izigebengu. Uhlu lufaka Joaquin Guzman - Mexican izidakamizwa nkosi nenhloko "Sinoala" - omunye nombimbi ngobukhulu izidakamizwa emhlabeni. Wakwazi ukuthola izigidigidi traffic insangu kanye ne-cocaine, okwakumenza abe omunye wabantu abacebe kakhulu emhlabeni. Into kuphela ukuthi cishe ukephi Guzman eyaziwa - wukuthi uhlala endaweni ethile ezindaweni enyakatho-ntshonalanga eMexico. Umvuzo ukuthunjwa isigebengu esiyingozi 5 izigidi zamaRandi.
"Yoldyzlyk" ( "Constellation yamakhono") - umkhosi bhá yaseTatarstan
Ductile yensimbi: izakhiwo, mshini futhi ububanzi